Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 21:25
Anonymous 24 April 2010 at 21:55
Anonymous 29 April 2010 at 00:45
nai 29 April 2010 at 16:20
:may be ok everything ... ( nai )
nai 29 April 2010 at 16:21
Anonymous 30 April 2010 at 19:52
ယောနက်သန်6May 2010 at 18:32
အလှကို ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသား ကစတင်ပေါက်ဖွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
♥ကိုဇော်♥ 8 May 2010 at 09:12
မေးထားတဲ့ မေးခွန်းက မရှင်းတော့ ဖြေသူတွေ လွဲဖြေကုန်ကြတယ်။ အခု မေးထားတာ ကြက် နဲ့ ကြက်ဥ လို မေးခွန်းလား။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာတွေကို တွေ့နေရလို့လဲ. . .
အလှတရား ဆိုတာ ခံစားမှု နဲ့ ပဲ ဆိုင်တယ်။
ပြီးတော့ ကြိုက်နှစ်သက်မှု . . .
ဒါကပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ . . . တရုတ်တွေ အတွက် ဝက်သားက ကြိုက်စရာ ပေမဲ့. . .ကုလားတွေကျတော့ မစားပြန်ဘူးလေ။
ဒါကြောင့် မြင်နိုင် ခံယူနိုင်တဲ့ လူနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း 8 May 2010 at 20:08
ကမ္ဘာရဲ့အလှဟာ...ရေ ကစတယ်ထင်တာပဲ...ရေရှိမှ သစ်ပင်..သတ္တဝါတွေ...ရှင်သန်နိုင်မယ်လေ..ဒါတွေရှိမှ..သစ္စာမေတ္တာ...လောဘဒေါသတွေ..ပေါက်ဖွားနိုင်မှာပေါ့
ချိုကျ 8 May 2010 at 20:52
မြင်းကို လူးကပဲစီးစီး မြင်းရှိလို့ပဲ ခရီးရောက်ရောက် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဟန်ချက်ညီဖို့အရေးကြီးတယ်ထင်မိတာပဲဗျ။ ကမ္ဘာ ကြောင့်ပဲ လှလှ အလှတရားတွေရှိလို့ ကမ္ဘာကပဲလှလှ အဓိက က ဟန်ချက်ညီဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
Anonymous 10 May 2010 at 04:54
စန္ဒားယားလှထွဋ် ရဲ့ အလှသစ္စာ တရား သီချင်းတော့ သိတယ်ဗျာ...။ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်က စစနင့်အပူလားလို့ ပြန်မေးကြည့်လိုက်။ ဒါမှမဟုတ် သိချင်ဝယ်ဖတ် ၁၀ကျပ်လို့ ပြောလိုက်။
၁၁ကျပ်ကျလို့ ... အဲလေ စိတ်ဓာတ်ကျနေရတဲ့ အထဲ အုံးစားတယ်ဗျာ...။